Wiil yar oo 13 jir ah oo ku eedeysan dilal oo dhismihii uu ku xirnaa ka baxsaday Mareykanka… – Hagaag.com
Posted on 13 Nofeembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Wiil 13-jir ah oo wajahaya laba eedeymo dil ah, ayaa ka cararay dhisme dowladeed oo ku yaal North Carolina ee Mareykanka wax yar ka hor inta uusan maxkamadda ka soo muuqan, taasoo ku kaliftay mas’uuliyiinta amniga inay soo rogaan baadi goob aan hore loo arag oo ay ku soo qabanayaan mar kale.
Wargeyska The Independent oo ka soo baxa Ingriiska ayaa sheegay in wiilka yar magaciisa la yiraahdo Jeriko W. oo cararay asaga oo caga cad kana xiran lugaha, wuxuu baxsaday kadib markii la rabay in la horkeeno maxkamad iyadoo lagu soo oogay dacwado dil, xatooyo iyo haysashada hub khatar ah.
Afhayeen u hadlay Xafiiska Robson County Sheriff, oo goob joog ka ahaa baxsashada, ayaa sheegay intii lagu guda jiray dhageysiga, eedeysanaha oo ku sugayay goobta lagu hayo inta la horgeynayo maxkamada isaga iyo laba maxbuus oo kale.
Sida laga soo xigtay ABC News 15, Jeriko wuu cararay isla markii la furay albaabka goobtii uu ku jiray oo ku cararay duurka, baxsashadiisa ayaa waxay dhalisay baadi goob aan horey loo arag. Halka Saraakiisha ay soo saareen digniin khuseysa nabadgelyada dadweynaha.
Jeriko ayaa la soo xiray 17kii October isaga oo looga shakisan yahay dilal.
Afhayeen u hadlay waaxda amniga dadweynaha ee gobolka ayaa sheegay in saraakiishoodu aad ay uga walaacsan yihiin nabadgelyada eedeysanaha iyo tan guudba sababtoo ah taariikhda Jeriko ee dhaqan xumada cadaawada ku dhisan iyo dabeecada lama filaanka ah ee uu leeyahay ayaa sidaa darteed wuxuu ugu baaqay dadweynaha inay ku wargaliyaan saraakiisha fulinta sharciga maxalliga ah haddii ay arkaan cunugga.
Saraakiisha waxay soo gudbiyeen magaca iyo muuqaalka cunugga iyagoo tixraacaya sharciga North Carolina, kaas oo u oggolaanaya in la magac dhabo ilmaha yar duruufaha noocaasi ah, waxayna sheegeen inay raadinayaan iyaga oo adeegsanaya Helikobtarro.
Dhanka kale, Nicky Jacobs, oo ah hooyada eedeysanaha, waxay rajeyneysaa in wiilkeedu iskiis isu dhiibi doono.